UJK Rowling: Iqhosha labasetyhini eliphantsi kwegama elinguRobert Galbraith. | Uncwadi lwangoku
UJK Rowling ubuyisa iklasikhi yabasetyhini phantsi kwegama elinguRobert Galbraith
UJK Rowling uhamba esuka kubacuphi benkulungwane yama-XNUMX phantsi kwegama elinguRobert Galbraith.
Ukhenketho loncwadi lukaJK Rowling kwi inoveli emnyama, epapashwe kunye Isibizo sikaRobert Galbraith, isinika UCormoran StrikeUmcuphi oqinileyo, owayesakuba ngumkhosi, owayengumlo wamanqindi, omubi kwaye omelele nangona elahlekile emlenzeni ezantsi kwedolo. Indoda enzima eya kuthi kwelinye ixesha inxibe umnqwazi kunye ne-cigar ngokusisigxina ijinga kwikona yomlomo wayo.
URowling usazisa ecaleni kwakhe, inyathelo elinye ngasemva, kwinkokheli yabasetyhini, uRobin, owabelana ngamatyala kunye neofisi nge-Strike, kodwa eneempawu zabafazi bamashumi amahlanu: URobin, uzimisele, uyazingisa, ubuthathaka kwaye ufuna ukhuseleko.
UCormoran Strike ujonge u-Ellin, usozigidi ogqibeleleyo nonempumelelo, uRobin noMaxwell, inkwenkwe engawuhloniphiyo umsebenzi wayo endaweni yayo ithi izinikele kumsebenzi oqhelekileyo ohlawulelwayo. URobin ngumlinganiswa othandekayo oneempawu ezincomekayo, okrelekrele kunye nomlo, kodwa uyayidinga kwaye uyayithanda iStrike ngendlela engqingqwa kwaye isondele, kangangokuba yahlula isimilo kumfazi olwela indawo yakhe, ngokulinganayo, eluntwini. Ikhulu lama-XNUMX.
Ukubetha, kwelinye icala, ukufutshane noPhilippe Marlowe kunabacuphi banamhlanjeKukude noBrunetti oqhelekileyo othanda umfazi wakhe, uPaola, abelana naye ngokuthanda ukutya kunye nokubhala. Kuwo onke la manqaku siyazana noCormoran Strike, ubuntwana bakhe obugqithisileyo kunye nomama olikhoboka kunye notata onogonyamelo, narcissistic kunye novila. Eli nyathelo lizimisele isimilo sikaStrike, sazi ngakumbi ngaye kunokuba besisazi ngabaphenyi bokuqala abanike ubomi inoveli yolwaphulo-mthetho, kodwa iziphumo ziyafana, kuba amava akhe akashiye naliphi na inxeba leemvakalelo kuye, uStrike uyoyika, ulungile, womelele kwaye uyakhusela, ngamanye amaxesha, ngaphandle kokufuna, Kulula ukubeka ubuso bukaHumprey Bogart njengoSam Spade okanye uStacy Keach kuthotho lukamabonakude olungalibalekiyo uMike Hammer.
KuRobin, oye wadlwengulwa ngelixa esekholeji kwaye wazama ukuluhlula, nangona engakhange afumane isibindi sokuphumelela emva kohlaselo, Kunzima ukumthelekisa nabacuphi abanjengoKinsey Milhone, uPetra Delicado, okanye mayeke ngabalinganiswa abanjengoLisbeth Salader. I-Rowling yakha umcuphi ofanelekileyo kwiminyaka ye-XNUMX, kufutshane kakhulu nonobhala ogqibeleleyo kaPhilippe Marlowe kunomcuphi Kwixesha elidlulileyo, ujongene nezona zaphuli mthetho njengo-Amaia Salazar.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UJK Rowling ubuyisa iklasikhi yabasetyhini phantsi kwegama elinguRobert Galbraith
Ungathini ngoAna, mandikuxelele ukuba ndizonwabele kakhulu ezi ncwadi, kukho into kuzo endibambe nje ngokulula. Nangona ngokuyinxalenye ndivuma nohlalutyo lomlinganiswa, kum uRobin unikezela okungaphezulu kunoko kutyhilwa kukugxekwa, ubuncinci kwisavenge sokugqibela abonakalise ezona mpawu zakhe, akangomcuphi, uqala ukubandakanyeka kuyo, Umcuphi wayeliphupha lobuntwana eliqala ukuhlala, ukumthelekisa nomcuphi kweli nqanaba lesimilo sakhe akubonakali kufanelekile, ukongeza, kuyaziwa ukuba ukuzinikela kwakhe ku-Strike akusekho njalo kwaye Ndiqinisekile ngokupheleleyo ukuba eminye imiceli mngeni kwiindlela zikaStrike ziya kuvela kuwe. Kude ekumchongeni njengomphenyi woluntu lwama-40s, ndimthatha njengowasetyhini wenkulungwane yama-XNUMX, ofana nabanye abaninzi, okweso sihlandlo sokulibala ukuba ngumfazi ofezekileyo azifumeneyo. Ndingalinda ukumgweba njengomcuphi ubuncinci kude kufike incwadi elandelayo
UAna Lena Rivera Muñiz sitsho
Sawubona Magali: Andizithandi iincwadi zikaRobert Galbraith, nangona ndinyanisile: andizithandi, kodwa ke apha, ndifunda ndiphindaphinda, kunye neOfisi yoBubi igqityiwe. Ndiyayithanda inoveli yeklasikhi nabantu abanzima kwindima yomcuphi; UPhilippe Marlowe okanye uSam Spade babelungile kwaye ndiyathanda ukuwafunda kwakhona unyaka nonyaka, nje ngeeveki ezimbalwa ezidlulileyo ndafumana elinye lamatyala kaPerry Mason alahlekileyo kwishelufa yam kwaye ndonwabile kakhulu ukuphulukana neeyure ezimbalwa naye kwakhona. Namhlanje uhlobo olumnyama luye lwavela, njengazo zonke iintlobo, kwaye abalinganiswa banamhlanje, bafana kakhulu nabantu bokwenene kuluntu esiphila kulo namhlanje. Njengakwiinoveli zikaAgatha Christie, banxibelelana ngeetrama kwaye namhlanje abacuphi basebenzisa i-WhatsApp kunye ne-imeyile. Namhlanje abantu basetyhini badlala indima ekhokelayo kwinqanaba elifanayo njengamadoda kwaye ababhali abaninzi bazibophelele kuyo. Iinoveli ezintathu zikaRowling kuhlobo lwenir ziyandikhumbuza ezakudala ngakumbi kunalezi zanamhlanje, kuyo yonke into, abalinganiswa ababhinqileyo nabesilisa kwaye ayonto imbi, sisimbo. Into endothusayo lolu khetho lombhali olunamava obuqu kaJK Rowling kwaye ndicinga ukuba inyani yokupapasha phantsi kwegama elimbumbulu eliyindoda ibalulekile kwisitayile asikhethayo kuthotho lwakhe olumnyama. Ewe ndiyakuphulaphula, kwaye apha ndiya kuba, ndikulungele ukufunda isavenge sesine. Siza kubona ukuba uRobin uvela njani kuba mhlawumbi, njengoko usitsho, uyavuthwa njengomntu nanjengomcuphi kunye nesimanga esilindileyo. Ndingavuya kakhulu ukuba bekunjalo Kwaye ukuba akunjalo, ayizukuba kukhetho lwam, kodwa ayizukuyenza ngcono okanye ibe mbi njengenoveli.
Enkosi kakhulu ngokufunda eli nqaku, ngokunika uluvo lwakho, ukugqabaza, kunye nokufumanisa enye indawo oza kuthi ulibukele kuyo ibali.
Phendula ku-Ana Lena Rivera Muñiz
"Ukufa akuyiyo eyona nto ibuhlungu" ngu-Inés Plana uyaqhubeka nokuthengisa
Amabali amafutshane adumileyo